Toddobaad tijaabo ah oo u dhexeeya Epic Games iyo Apple. Soo koobida waxa dhacaya | Waxaan ka socdaa mac
Toddobaad tijaabo ah oo u dhexeeya Epic Games iyo Apple. Soo-koobidda waxa dhacaya
Bishii Maajo 3, Maxkamadeyntii u dhaxeysay Epic Games iyo Apple ayaa bilaabatay. Dhammaantood waxay bilaabeen markii soo saaraha ciyaarta fiidiyowga uu go'aansaday inuu ku xadgudbo xeerarka App Store iyo go'aannada ay ka gaadheen Apple ka dambeeya, xitaa way lumiyeen koontada soo-saaraha. Waxaan horey u haysanay toddobaad tijaabo ah waana tan ugu xiisaha badan maalmahan.
1 Qareennada shirkadda Apple ayaa labadii maalmood ee ugu horreysay dacwadooda geeyay xarunta beeraha
2 Laga soo bilaabo maalinta 3 ilaa 5 ee tijaabada u dhaxeysa Epic Games iyo Apple, sheygu sidaa uma uusan aheyn muhiim
Qareennada shirkadda Apple ayaa labadii maalmood ee ugu horreysay dacwadooda geeyay xarunta beeraha
Dhammaantood waxay ku bilaabeen bayaanka labada shirkadood. Doodaha bilowga ah, mid kasta oo difaacaya booskiisa garsooraha kiiska hortiisa. Epic wuxuu diiradda saarey muujinta Apple iyo App Store oo ah hanti-wadaag iyo ladagaalanka tartamada deegaanka oo aan ku siinin waxtarka macaamiisha ay Apple dhiirrigeliso Shirkadda wax soo saarku waxay soo bandhigtay emayllo fara badan oo ay soo direen Steve Jobs, Craig Federighi, Luca Maestri, Tim Cook, Eddy Cue iyo Scott Forstall oo tilmaamaya dhismaha Apple ee istiraatiijiyadda dhismaha. derbi aan laga gudbi karin inta kale.
Tim Sweeney, Maamulaha guud ee shirkadda Epic, ayaa ka markhaati kacay qaabka ganacsi ee shirkaddiisa, xiriirka uu la leeyahay shirkadaha sida Microsoft iyo Sony, iyo arrimo kale. Xaqiiq xiiso leh Waxay ku timid markii Sweeney qirtay inuu isticmaalo iphone iyadoo ay ugu wacan tahay Apple oo diirada saaraysa arrimaha gaarka ah iyo amniga oo ka jawaabaya weydiimaha ka socda qareenada Apple.
Qareennada Apple, dhinaca kale, waxay diiradda saareen Faa'iidada ay siiyaan horumariyeyaasha barnaamijyadooda. Tan waxaa ka mid ah helitaanka hantida aqooneed ee Apple, sida noocyadeeda kala duwan ee API-yada iyo ilaha horumariyaha. Waxay si xoogan diirada u saareen isticmaalka Epic ee loo yaqaan 'Metal graphics API'. Shirkaddu waxay iftiimisay emayllada gudaha ee ka soo baxa maamulayaasha Epic oo ammaanaya Birta. In 2018, Epic sidoo kale waxay soo bandhigtay tixraac loogu talagalay WWDC, codsi ka yimid Apple, kuna ammaanaya Birta.
Laakiin furaha waxaa laga helaa su'aasha iyo jawaabta soo socota:
Garyaqaanka Apple: Haddii Apple ay kuu sheegi lahayd inay ku siin doonaan heshiis oo aanad jirin horumariya kale, Miyaan aqbali lahaa?
Sweeney: Haa, waan heli lahaa.
Sida ay yiraahdaan, Ma jiraan su'aalo dheeraad ah, Sharaftaada.
Laga soo bilaabo maalinta 3 ilaa 5 ee tijaabada u dhaxeysa Epic Games iyo Apple, sheygu sidaa uma uusan aheyn muhiim
Waxyaabaha ugu khiyaanada badan waxay ahayd in Apple ay is arkeen inta udhaxeysa dhagax iyo meel adag oo isku dayaya inay ka hortagaan Netflix Jooji Taageerida Iibsiga-App on App Store. Mawduuc emayl ah ayaa muujiyay isgaarsiinta gudaha ee Apple markii shirkaddu ka ogaatay qorshayaasha Netflix. Maamulayaasha Apple ee qeybta emailka waxay abaabuleen shirar kala duwan oo lala yeeshay Netflix si looga wada hadlo tijaabooyinka la qorsheeyay ee shirkadda.
Maalintii afraad ayay bilaabeen inay caan ahaadaan markhaatiyada qaarkood:
El Madaxweyne kuxigeenka App Store Wuxuu sharraxay in Apple muddo dheer diiradda saartay amniga bakhaarka isla markaana beenisay talo soo jeedinno ku saabsan waxyaabo ay ka mid yihiin habab kale oo lacag lagu bixiyo iyo barnaamijyada soo dejinta Garsooraha Rogers wuxuu diiday diidmada sii socota ee Epic inuu ku aqbalo dukumiintiyada qaarkood caddayn ahaan, iyadoo lagu saleynayo arrimo ay ka mid yihiin ku habboonaanta iyo dukumiintiyada sheegaya dhinac saddexaad. Madaxweyne ku xigeenka iyo qareenadiisa ayaa iska ilaaliyay inay qirtaan taas qaar ka mid ah isgaarsiinta gudaha Apple tijaabo ahaan. Wax aan shaki ku jirin inay ku habboon yihiin shirkadda tufaaxa.
Maalintii ugu dambeysay ee tijaabada laakiin wali waxaa haray xaabo badan, Trystan Kosmynka, Faahfaahin ka bixiyay in kudhowaad 5 milyan oo codsi ah loo diro App Store sanad walba iyo intaas heerka diidmada dalabka waa in ka yar 40%. Sanadkii 2019, 4.808.685 barnaamij ayaa loo gudbiyay nidaamka dib u eegista App Store, 36% kamid ahna waa la diiday. Barnaamijyadan la diiday, ilaa 215.000 ayaa jabiyay tilmaamaha gaarka ah ee Apple.
Waqtigan la joogo wax yar "chicha" laakiin weli ma aysan taaban tallaalada waaweyn ee shirkadaha si ay u shaaciyaan. Waan feejignaan nahay sababtoo ah tijaabadan wax badan ayuu ka beddeli karaa Apple sidaas darteedna dadka isticmaala aaladaha tufaaxa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Toddobaad tijaabo ah oo u dhexeeya Epic Games iyo Apple. Soo-koobidda waxa dhacaya
Ku dheji AirTag Remote Siri ee Apple TV haddii aad leedahay daabacad 3D ah
Sawirkii ugu horreeyay ee laga soo qaaday dilkii Martin Scorsese ee filimka Ubaxa Dayaxa